Daroogada Naqshadeeye Wadooyinka Khatarta ah • Dawooyinka Inc.eu
Daroogooyinka khatarta leh ee naqshadeeya dariiqa
Marka lagu daro daroogooyinka caanka ah sida kookaha, xashiishadda iyo XTC, waxaa sidoo kale jira dawooyin badan oo naqshadeeyayaal ku jira wareega. Tusaale ahaan Spice, Flakka, GHB iyo Krokodil. Daawooyinka aan cidina si sax ah u ogeyn waxa ku jira oo aad ugu kala duwanaan kara xoog ahaan, isticmaalka aad u khatar badann.
Waxaan ku bilaabaynaa Spice, oo ah daroogada ay badanaa ku isticmaalaan England dadka guri la'aantu. Waxay isugu jirtaa geedo kala duwan iyo kiimikooyin. Isticmaalayaasha ayaa u caba sida marijuana ama waxay u rogaan nooc ka mid ah cabitaanka shaaha u eg.
Sidoo kale loo yaqaan Black Mamba, K2, Bombay Blue ama Moon Rocks, daroogada waxaa loo yaqaanaa daroogada zombie. Daawada xarunta waxay leedahay saameyn la mid ah tan xashiishadda waxayna bixisaa dareen farxad iyo nasasho badan. Si kastaba ha noqotee, xeryahooda ku jira Spice waxay u horseedi karaan saameyn aad u xoog badan oo u oggolaaneysa dadka isticmaala inay la kulmaan weerarro walaac daran, jahwareer iyo fikirro.
Dawadan naqshadeeye waxay u egtahay milixda qubeyska. Dhejinta midabka midabka leh ayaa siyaabo kaladuwan loogu adeegsan karaa. Isticmaalayaashu waxay cunaan, cunaan, ku duro ama ugaarsadaan daroogada iyagoo isticmaalaya sigaarka elektaroonigga ah. Waxay leedahay saameyn firfircoon, laakiin waxay sababi kartaa mala-awaal waxayna kuu horseedi kartaa rabsho ama is-waxyeelyeyn. Daawada waxaa lala xiriiriyay geerida wadne qabadka, ismiidaaminta iyo dhaawaca kalyaha ama kilyaha oo shaqeyn waayey.
Daawadani kuma badna Maraykanka iyo Yurub, laakiin waxaa si weyn loogu isticmaalaa Ruushka, gaar ahaan dhalinyarada waaweyn sida beddelka u hooseeya ee hirowiinka. Waa qaab dad-samee ah oo loo yaqaan morphine oo qiyaastii 10 jeer ka xoog badan. Waa isku darka kiimikooyin dhowr ah oo waxyeello leh, oo ay ka mid yihiin koodhin, iodine, shidaal, rinji khafiif ah, dheecaan khafiifa, iyo kuwo kale. Isticmaalayaasha waxay ku duraan dhiiga waxayna leedahay saameyn deg deg ah oo gaaban. Yaxaas ayaa loogu magac daray astaamaha uu maqaarka kaga tago. Waqti ka dib, waxay dhaawacdaa xididdada dhiigga waxayna maqaarka ka dhigtaa mid cagaaran oo jajaban.
Gamma hydroxybutyric acid (GHB) waa dawo aad si fudud naftaada u samayn karto iyo halka halista balwada ay aad ugu badan tahay. Waxaa intaa dheer, way adagtahay in laga takhaluso balwadan. Daawada ma aha oo keliya wax fudud inaad naftaada sameyso, laakiin sidoo kale waa mid aad u jaban, taas oo ka dhigaysa mid aad u soo jiidasho leh dhalinyarada. GHB waxay leedahay saameyn xakameyn iyo adeegsiga dhexdhexaadka ah waxay leedahay saameynta khamriga. Qiyaasta sare ee GHB waxay qofka u horseedi kartaa inuu miyir beelo. Waxay yareyn kartaa neefsashada iyo garaaca wadnaha
Dammiinka daroogada ee Twente oo badiba ah degaannada la deggan yahay
Nederland waa hogaamiye caalami ah marka ay timaado wax soo saarka iyo ka ganacsiga ...
Mashruuca Rotterdam: Caveman wuxuu ka soo laabtay dib u kabashada Koonfur Afrika
Barnaamijka caanka ah ee telefishanka 'Het Rotterdam Project' wuxuu dhammaaday dhammaadkii 2018. Barnaamijka Beau wuxuu ku caawiyay, a
Narcos: Mexico Ugu dambeyntii Soo Laabashada - Xilliga 2 waxaa lagu arki karaa Netflix laga bilaabo Febraayo 13.
Wanaagsan Maalinta Jacaylka ee soo socda: waxaan kuu haynaa koox ka ganacsata daroogada Mexico. Sannad ka hor ago